Ahoana ny fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsung Galaxy S 3 | Androidsis
Ao amin'ny lesona manaraka, Hampianatra azy ireo aho, mampiasa odin 3.7, dia ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsnug Galaxy S 3, na fantatra koa amin'ny hoe GT-i9300.
Amin'ny fanaovana izany dia ho vonona ny terminal mampiasa fampiharana izay mila tombontsoa superuser, ary afaka manao a koa isika backup na nandroidbackup an'ny rafitra iray manontolo, ankoatry ny mahavita romana nandrahoina sy novaina ho an'ity fitaovana manokana ity.
2 Ampidiro amin'ny alàlan'ny KIES ny mpamily ilaina
3 Famerenana ClockworkMod fanarenana
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ampidino ny Android SDK ho an'ny Windows e apetraho amin'ny PC-nay izany.
Hamoaka ny Samsung Kies koa izahay ary hametraka izany amin'ny solo-saintsika manokana.
Raha vantany vao tafapetraka ny zavatra roa, Hanangana indray ny solosaina isika ary afaka miroso amin'ny dingana manaraka.
Ampidiro amin'ny alàlan'ny KIES ny mpamily ilaina
Hanokatra ny Samsung KIES ary hampifandray ny finday amin'ny solo-saintsika amin'ny alàlan'ny tariby usb misy azy isika dia hiandry KIES fantaro ny fitaovana.
Rehefa fantatra, hakatonay ny KIES ary hesorinay ny tariby usb amin'ny Samsung Galaxy s3, izao hiditra ny menio fanovana fitaovana ary hampandehaninay ny debugging USB, hampifandray azy io amin'ny solosaina isika amin'ny alàlan'ny tariby usb-ny (nikatona ny KIES) ary hiandry isika vitao ny fametrahana ireo mpamily sisa.
Famerenana ClockworkMod fanarenana
Ny zavatra voalohany hataontsika dia misintona odin 3.7 ary ny kernel novaina tamin'ny fanarenana vaovao, raha vantany vao alaina ireo rakitra roa, dia hofongorantsika amina fampirimana vaovao eo amin'ny birao, ary ho tanterahinay ho mpitantana ny odin 3.04.exe:
ankehitriny tsindrio ny bokotra PDA ary hisafidy ilay rakitra ao amin'ilay fampirimana isika CF-Root alaina teo aloha, hananantsika fiheverana manokana fa ao odin, ny boaty fanasarahana tsy voamarina, averiko ihany ny RE-FIZARANA TSY AZO HATAO.
Tsy maintsy hamono ny Samsung Galaxy s3, atodiho fomba fampidinanaary ampifandraiso amin'ny alàlan'ny usb amin'ny solosaina.
Hiandry ny faneken'i odin azy isika, ho fantatsika fa nahafantatra azy io, satria ao anaty boaty eo ankavia havia, ny antso ID: COM, hivoaka ny teny COM arahin'isa maromaro miaraka amin'ny fototra mavo.
Hanindry izahay Start ary hiandry ny famaranana ny fizotrany isika, izay hifarana rehefa averin'i odín amintsika ny teny PASS.
Amin'io fotoana io ny Samsung Galaxy s3 dia hiverina indray ary afaka manamarina avy eo isika ny vatasarihana fampiharana Araka ny ananantsika fampiharana vaovao roa napetraka, ny iray dia ny superuser, ary ny iray kosa dia ny Mpitantana CWM.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny famongorana ny Samsung Galaxy S3
Ampidino - Odin 3.7, Kernel novaina, Android SDK, Kies Samsung
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S 3, ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny dingana iray
Turko46 dia hoy izy:
Izy io dia miasa amin'ny Galaxy S3 avy amin'ny mpandraharaha AT&T.
Valiny amin'i Turko46
Yubanixanan6 dia hoy izy:
Mahazo lesoka aho rehefa manokatra odin
Valiny amin'i Yubanixanan6
Ahoana ny fandefasana ny takelaka Samsung Galaxy 7 "amin'ny fomba Overcome
Samsung Galaxy S, Rom Gnex Stock 1.4.1 Android 4.04 avy amin'i Elite